Work Shop And Creatives – Beekan Guluma Erena
Work Shop And Creatives	Beekan Erena
Education April 7, 2016April 7, 2016	4 Comments
Work Shop And creatives
Kaayyoon koorsii kanaa akka waliigalaatti, barattoonni dandeettiifi ogummaa kalaqa barreessuu irratti qaban guddifatu/fooyyeeffatu. Malleen ogumaa Oromoo ittiin sakatta’uun ogummaa afaanii wal-faana guddifataniratti muxannooo horatu. Haaluma kanaan xiyyeeffannoon oguma barreeffamaa yoo ta’u, oguma kana utuma shaakalaa jiranii aadaa, jiruu jireenya hawaasaafi ogummaa afaanii daran guddifatu. Barattoonni gara beekumsa eerame kanaatti dhufuuf ammoo asoosamoota, kitaabota Afaan Oromoofi Afaan Ingiliziitiin katabamanii jiran dubbisanii beekumsa irraati gonfatu. Barattoonni beekumsa kallattii garaagaraarraa argatanirraa ka’anii walaloo, asoosama gabaabaa, asoosama dheeraafi barruu garaagaraafi mata duree garaagaraarratti barreessuun hojii xumurame tokko qabatamatti agarsiisu. Dabalataan kitaabota barreessuuf yeroo itti barattoonni kaka’umsa argataniifi barreessuu eegalan yoo ta’u, dandeettiin uumamaan jiru karaa saayinsii koorsii kanaatiin ifa ba’a. Dhumarratti hojii koorsii kana keessatti hojjetamu keessaa filachuun beekumsa aadaa hawaasa Oromoo giddu galeeffate akka Leenjii (work shop) tti jamaaf (barattootaaf barsiisotaaf) dhiyeessuudha. Walumaagalatti Koorsiin barruu qalaqaa (creative writing) jedhu kun barattoonni oguma barruu adda addaarratti xiyyeeffachuun kennaa qabaniifi(talents) dandeettii barreessuu (writing skills) isaanii akka cimsan kan gargaarudha. Haaluma kanaan barattoonni goorowwan ogbarruu garaagaraa (Asoosama, walaloo, do’iifi kkf.)barreessitoota beekamoon (kanneen muuxannoo qabaniin) barreeffaman bu’uureffachuun kan mataasaanii (dhuunfaan ykn gareen) akka barreessan xiyyeeffannoon nitaasifama. Egaa hojjetaa gaariin ofirra darbee addunyaafuu…
← NA BAASI BIEMMADDUU
Asoosama Gabaabaa- Barreessaan: Hamzaa Jemal Mohammed →
4 thoughts on “Work Shop And Creatives”	Bokkuu DibaabaaApril 7, 2016 at 6:51 pmPermalink	Na
Reply	Bokkuu DibaabaaApril 7, 2016 at 6:54 pmPermalink	Eyyee hunduu baay ‘ee namaatti tola .nuu jiraadhu.
Reply	dawit dhinsaApril 7, 2016 at 7:02 pmPermalink	beekan amaa ilee beekaa oromoo ta’ii sabakeef
kutanoon kee bayee nama bonsa
baga sii qabaane
Reply	sharaf yusufJune 11, 2016 at 5:24 pmPermalink	Beekaa hojiin keeti hojii fakkeenya ta’udha rabbiin umrii harragessa siif haa laatu. jabaadhu sabni kee ammalle waan baay’ee sirra egna nuuf jiraadhu